इस्त्री स्टेशन - iSearch
सुरु घरेलू उपकरण इस्त्री स्टेशन
अक्टोबर 29, 2017
महान समय र काम राहतको लागि इस्त्री स्टेशन, यसमा भिन्नता सामान्य फलाम यसैले धेरै स्पष्ट छ। गृहिणी र घरपरिवार राम्रोसँग जान्दछन् कि कति महत्त्वपूर्ण छ लुगा लगाएका कपडाहरू व्यावसायिक जीवनमा र नि: शुल्क समय हो। चिकनी लोहे भएका कपडाहरू स्वच्छ उपस्थितिका लागि खडा हुन्छन्। यद्यपि, एक मोडमा निर्णय गर्नु अघि, हाम्रो जानकारीको राम्रो विचार प्राप्त गर्नको लागी यो सल्लाहकार छ इस्त्री स्टेशन गर्न
1 इस्त्री गर्ने स्टेशन कस्तो छ?
2 सञ्चालन सजिलै व्याख्या गरिएको छ
3 इस्त्री गर्ने स्टेशनको इमानदार फाइदाहरू
5 खरिद निर्णय विचार गर्नुहोस्
5.1 वातावरणीय चेतना छान्नुहोस्
5.2 योजना अन्तरिक्ष आवश्यकताहरू
5.3 नामकरण गरिएका निर्माताहरू
7 अनलाइन किन्नुहोस् वा डिलरमा?
7.1 डीलरमा खरीद
7.2 इन्टरनेटमा खरीद गर्न सजिलो
8 हट भाप को सुरक्षित हैंडलिंग
10 तपाईंलाई उपयुक्त इस्त्री बोर्ड चाहिन्छ?
11 इस्त्री गर्ने स्टेशनबाट कसले लाभ उठाउँछ?
13 उचित रखरखाव राख्नुहोस्
14 वैकल्पिक: भाप लोहे
इस्त्री गर्ने स्टेशन कस्तो छ?
एक बाट इस्त्री स्टेशन जब लोहे र एक अतिरिक्त बोलाईन्छ आधार स्टेशन भेट्टाउन सकिन्छ। त्यसैले कि भाप लगातार उत्पन्न हुन्छ, एक सुनिश्चित गर्दछ एकीकृत बायलर यस दावीको आधार आधारमा। अन्य अर्गानको विपरीत, बायलरमा उत्पन्न गरिएको पानीको पानी नली मार्फत पारित गरिन्छ। यो एक मा छ इस्त्री स्टेशन बाट लोहा हल्का वजन र जोइन्टहरूमा, त्यसैले इस्त्री तपाईंको लागि एकदम कम साहसी छ। इस्त्री गर्ने निरन्तर पुनरुत्थान पनि सफा गरिएको छ। इस्त्री को एकदम मात्रा मा, तपाईं चाँडै एक इस्त्री स्टेशन को धेरै फायदाहरु को नोटिस गर्नेछन्, र तपाईं पहिलो उपयोग पछि यसलाई सम्झना नहीं चाहेंगे।
राम्रो निर्माताको स्टीम फलाम सुधार र नवाचारमा लगातार काम गर्दछ, यसैले फाइदाहरू पनि सफा हुन सक्छ। यो प्रविधि निरन्तर यहाँ बढ्दै गएको छ र अघिल्लो फराकिलोलाई पछाडीको सीट लिन सकिन्छ।
यदि अधिग्रहणले पहिला उच्च लागत समावेश गर्दछ भने, तिनीहरू चाँडै तपाईंको लागि भुक्तानी गर्नेछन्। तपाईं ऊर्जा र समय बचत गर्नुहुन्छ, हल्का लोहे संग काफी कम गर्न को लागी।
सञ्चालन सजिलै व्याख्या गरिएको छ
भावना जब एक इस्त्री उच्च स्टोनेसिंग प्रभाव प्राप्त गर्न। धेरै राम्रो प्रविधिको लागि धन्यबाद, यो एक इस्त्री स्टेशन द्वारा सम्भव छ। उत्पन्न गरम भाप (4,5 -6पट्टीको बारेमा) भाप नलीको नेतृत्व गरिन्छ। यो फलामको एकमात्र टुक्रामा वितरित गरिन्छ। भाप कपडामा फैलिएको छ, एकै समयमा लोहेको ठूलो गर्मी द्वारा सुकेको। यस प्रक्रियामा धेरै स्मोथिंगको सम्बन्धमा हुन सक्छ प्रभावकारी परिणामहरू प्राप्त।
इस्त्री गर्ने स्टेशनको इमानदार फाइदाहरू
इस्त्री गर्न को लागी एकदम समय र ऊर्जा लाग्न सक्छ, विशेष गरी यदि इस्त्री रकम निरन्तर रूपमा वर्गीकरण गर्नु हो। इस्लामिक स्टेसनको साथ तपाईंले यो बचत गर्नुहुनेछ र समाप्त हुन सक्नुहुनेछ अतिरिक्त खाली समय खुसी। यी मोडेलहरू धेरै सहज छन् र हात समात्ने क्रममा ergonomic। कुनै कपडाहरू, मोटाई वा मोटा पनि, धेरै प्रयत्न बिना चिकनी हुनेछ - र यदि आवश्यक हुन्छ माथि freshened, सामान्य बिरुवाहरू संग भापले कपडाहरू घुम्न नसक्दा त्यसो त प्रभावकारी हुन्छ किनभने तिनीहरू धेरै दबाबमा छन्। किनकि सबै फाइबरले उही तापमान बर्खास्त गर्दैन, यो सजिलै संग एक इस्त्री स्टेशनमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। रेशम, पलिएस्टर र मखमल जस्ता धेरै नाजुक वस्त्रहरूको लागि महत्त्वपूर्ण। एक महत्त्वपूर्ण फाइदा पनि हो सजिलो भर्ती पानी संग।
मूलतया, यी मोडेलहरूको इस्त्री परिणाम। परिणामहरू महत्त्वपूर्ण र अझ राम्रो छन् हल्का वजन लोहेको चाँडै दिक्क लाग्यो। यस प्रकार, एक ठूलो लुगा धोने को पर्वत को इस्लाम पछि पनि तपाईंलाई दुखाइ र थकान को बारे मा शिकायत गर्न को लागी छैन।
तपाईं फलामिङ स्टेशन र एक परम्परागत फलामबीचको भिन्नताबाट महत्त्वपूर्ण लाभ उठाउनुहुन्छ। उच्च दबावमा धन्यवाद तपाईं पनि एकै समयमा कपडाको धेरै तहहरू सुचारु गर्न सक्नुहुनेछ। प्रभावकारी दबाव पानी बायलरमा सिर्जना गरिएको छ।
खरिद निर्णय विचार गर्नुहोस्
आफैलाई मूर्खता नसुन्नुहोस् इस्त्री स्टेशन, एक गलत खरिद निर्णयले तपाईंलाई निरन्तरता दिनेछ र प्रयोगको क्रममा समस्याको कारणले गर्दा। निश्चित रूपमा तपाईं लामो समयसम्मको आशा गर्नुहुन्छ, तर पनि राम्रो मूल्य को लागि मुद्रा, निश्चित रूपमा दावी एक हुनुपर्छ इस्त्री स्टेशन सेवा प्रदान गर्न उपयुक्त छ। यदि तपाईं अहिले हरेक एक वा दुइवटा कपडाहरू फलाम गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको दावी उच्च हुनेछैन। यद्यपि, धेरै फलाम र प्रायः लोह, तपाईले तलको अनुसार एक हुनुपर्छ शक्तिशाली मोडेल चयन गर्नुहोस्। निर्णायक पनि तपाईलाई लोहा गर्न चाहानुहुन्छ। धेरै मोटा कपडाले एक स्टेशनबाट प्रदर्शन गर्ने स्वरको उच्च स्तरको माग गर्दछ, जस्तै अधिक नाजुक कपडाहरूको विरोध। पानी भाप द्वारा सुचारु हुन मोटेको लागि, एक उच्च दबाब अवस्थित हुनु पर्छ। यो एकमात्र तरिका हो जुन तपाईले इस्त्री गर्न सक्नुहुनेछ सुँगुर कपडाहरू खुसी।
वातावरणीय चेतना छान्नुहोस्
व्यापक वर्गीकरणमा स्टीम फलाम एक वा अन्य रोचक अतिरिक्त फेला पार्नुहोस्। त्यसैले मोडेलहरू छन् ऊर्जा वा पर्यावरण बचत कार्यहरू उदाहरणका लागि, जस्तै Tefal GV5245 भाप इस्त्री स्टेशन एक्स्क्रर्ड प्रेसिङ। यसले आंशिक रूपले लगभग पाँचौं ऊर्जाको बचत गर्न सक्छ, जसले प्रायः प्रयोगको साथ स्वाभाविक रूपमा जोड्न सक्छ। यस्तो लागि निवेश इस्त्री स्टेशन वातावरणको खातिर निश्चित रूपमा सार्थक छ।
कुनै उत्पादहरू फेला परेनन्।
योजना अन्तरिक्ष आवश्यकताहरू
खरीद गर्नु अघि सफा नबिर्सनुहोस्। सँधै लुगा लगाइएको छैन, त्यसैले तपाईंको वांछित मोडेलको ठाउँ चाहिन्छ जहाँ यसलाई भण्डारण गर्न सकिन्छ। आयाम धेरै फरक छन्, तर खरिद गर्नु अघि निर्धारण हुनुपर्दछ। स्टेसनको वजन नबिर्सनुहोस्! बीचमा, निर्माताहरूले मोडेल प्रस्ताव गर्छन् जुन भण्डारण गर्न धेरै ठाँउ चाहिँदैन।
नामकरण गरिएका निर्माताहरू
घरको उपकरणको लगभग हरेक प्रसिद्ध निर्माता पनि छ इस्त्री स्टेशन उनको कार्यक्रममा। जर्मनीमा, एईजी, सीमन्स, तेफल, रोनेन्टा र फिलिप्स सबैभन्दा प्रसिद्ध निर्माताहरू हुन्। यहाँ, खरीदारलाई विशेष गरी आफ्नो आवश्यकताहरु को लागी उत्पादनहरु को चयन गर्न को लागि आदर्श अवसर छ। यो कसरी काम गर्दछ ठूलो पानीको ट्यांक उदाहरण को लागि, शुभ यदि इस्त्री को ठूलो मात्रा मा खर्च गरिन्छ। पानीको ट्यांकको आवश्यक भरपर्दो आवृत्ति कम हुन्छ र समय बचाउँछ। अन्य सुविधाहरू फरक प्रकृति वा फलामको आकार वा एकलप्लेटमा पाइन्छ। त्यसैले उपकरण विशेष आवश्यकताहरु को लागि फरक राम्रो छ, उदाहरण को लागि शर्ट को इस्त्री को लागि।
त्यसैले तपाईं त्रसित पानीको प्रयोगको लायक अक्सर घटाउनु पर्दैन। लाइनबाट फिल्टर गरिएको पानीको प्रयोग पनि उपयोगी छ।
अनलाइन किन्नुहोस् वा डिलरमा?
सबैभन्दा पहिला, एक विशेष खरिद गर्ने निर्णय इस्त्री स्टेशन कृपया, आफैलाई सोध्नुहोस् जहाँ तपाईं आफ्नो सपना मोडेल खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग डीलरमा खरीद बीचको छनौट छ, तर इन्टरनेटले तपाईंलाई खरीद गर्न अवसर प्रदान गर्दछ। विगतमा स्थानीय व्यापारी एकमात्र छनौट थियो अनलाइन खरिद दृढतापूर्वक ध्यान मा। अज्ञात छैन, किनभने तर्कहरू इन्टरनेटमा खरिदका लागि दृढता बोल्दछ।
स्थानीय व्यापारीमा खरीद गर्न फाइदाहरू छिटो व्याख्या गरिएको छ। तपाईं सीधा मोडेल देख्न सक्नुहुन्छ र खरीद पछि तुरुन्तै यसलाई लिन सक्नुहुन्छ। दुर्भाग्यवश तपाइँ सामान्यतया विभिन्न स्टेशनहरूको एक ठूलो व्यापारी चयनमा फेला पार्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै गरी, यहाँ धेरै आकर्षक सौन्दर्य मूल्यहरू बरु दुर्लभ हुन्छन्। अधिकांश व्यापारीहरूले मूल्यको साथ केही पैसा तल जान्छन्, तर ठूलो मात्रामा बचतको साथ तपाईं यहाँ थप आशा गर्न सक्नुहुन्न। कहिलेकाहीँ विक्रेताहरूले अवस्थित मोडेललाई विशेष रूपमा राम्रो बनाउन प्रबर्धन गर्ने प्रयास गर्छन्। नकारात्मक पनि दृष्टिकोण हो, पार्किंग स्थान, यात्रा लागत र निश्चित उद्घाटन समय जब एक व्यापारीलाई नोटिस गर्न खरीद। सधैं सक्षम सल्लाहकारहरू तपाईंको लागि उपलब्ध छैनन्। यदि त्यसो भए, तपाईलाई प्रायः धैर्यको साथ पर्खनु पर्दछ जबसम्म तपाईको लागि कुनै समय छैन। लामो लाइनहरू फारम, र धैर्यता परीक्षणमा राखिएको छ। कार्यरत व्यक्तिहरू समयमै सीमित हुने समयहरूमा सीमित छन्। मूल्यवान खाली समय हराएको छ।
इन्टरनेटमा खरीद गर्न सजिलो
वास्तविक सम्झौता अर्कोतर्फ, तपाईं तिनीहरूलाई धेरै भेट्टाउनुहुनेछ अनलाइन विक्रेता, यहाँ खोज वास्तवमा आकर्षक प्रस्तावहरू फेला पार्न सकिन्छ। इस्त्री स्टेशन तपाई यसलाई यहाँ एक धेरै ठूलो चयनमा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईसँग निःशुल्क छनौट छ। निस्सन्देह तपाईं इन्टरनेटमा स्वागत छ राम्रो उत्पाद वर्णन उपलब्ध। यो दिन 24 घण्टा किन्नको लागि पनि राम्रो छ, त्यसैले सुरु हुने समयले तपाईंलाई समयको दबाबमा राख्दैन। स्थानीय व्यापारीलाई खरिद गर्दा तपाईं अप्रिय परिस्थितिहरूबाट बच्न सक्नुहुन्छ। प्रोफेसरहरूले यस तथ्यलाई सराहना गर्छन्। अनलाइन खरिद सस्तो छ र धेरै समय बचत संग सम्बन्धित छ। ग्राहक समीक्षाहरू तपाईंका लागि अनौपचारिक माध्यमबाट धेरै जानकारीपूर्ण छन्। यो समीक्षाहरूले कसरी प्रयोगात्मक र व्यावहारिक मोडेलहरू दैनिक रोजगारीमा छन् भन्ने जानकारी प्रदान गर्दछ। इन्टरनेटमा, तपाईंले धेरै प्रदायकहरूबाट, टेलिफोन वा च्याटमा समेत सक्षम सल्लाह पाउनुहुनेछ। प्रश्नहरू ईमेल द्वारा धेरै राम्रो तरिकाले स्पष्ट गर्न सकिन्छ।
हट भाप को सुरक्षित हैंडलिंग
निर्माताको बारेमा कसरी जानकारी इस्त्री स्टेशन घरको कुनै पनि खतराहरू प्रस्तुत नगर्नुहोस्, जबसम्म तपाईं निर्माताको आचार संहिता पालन गर्नुहोला। पानी बूँदको बिरोधको जलार्इ विरुद्ध, उदाहरणका लागि, केही यन्त्रहरूमा ड्रिप स्टप, द्वारा बाफ विनियमन प्रयोगकर्ताको रूपमा नियन्त्रण राख्नुहोस्। पानी भरिएको लामो समयको लागि अब लामो खतरा छैन, किनकि सुखद आनन्दको लागि खुल्लापन। आदर्श पनि एक भनिन्छ स्वचालित बन्दजसले जान्छ कि कसरी प्रयोगमा नपढेको छ भने आफैले अपेक्षाकृत तुरुन्तै प्रस्तुत गर्दछ। यो संधै लोहा गर्ने स्टेशन एक सुरक्षित र फोहोरी मुक्त स्ट्यान्ड प्रस्ताव गर्न महत्वपूर्ण छ। यदि आवश्यक छ भने यहाँ प्रयोग नगर्नुहोस् मिल्दो इस्त्री बोर्ड खरिद गर
मूलतया, इस्त्री गर्दा, सधैं बच्चा र जनावरहरूमा ध्यान दिनुहुन्छ। वास्तवमा, एक सानो बच्चाको हात जिज्ञासा बाहिर फलामको दिशामा चाँडै जान सकिन्छ। बिरालो र कुत्तहरू थाहा छैन कि उनीहरूको लागि गर्मी कसरी खतरनाक हुन्छ। कृपया यहाँ सचेत हुनुहोस्!
तपाईंलाई उपयुक्त इस्त्री बोर्ड चाहिन्छ?
त्यसैले तपाई साँच्चै तपाईंको परिणाम पाउनुहुन्छ इस्त्री स्टेशन कुनै पनि अवस्थामा, एक मिल्दो इस्त्री बोर्ड आवश्यक छ। तपाईलाई ध्यान दिनुपर्छ स्थिरता किनभने यो दुर्घटना-मुक्त इस्त्रीको लागि सुरक्षा तत्व हो। नयाँ इस्लामिक बोर्डहरूमा प्रायः चाहिने शक्ति छ, तर यसलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। निस्सन्देह, यो एक स्टेशन खरिद गर्दा इस्त्री बोर्ड खरीद गर्न कर्तव्य होइन। यद्यपि, यदि तपाइँसँग चिन्ता छ भने, तपाईंले नयाँ इस्त्री बोर्डको लागि रोज्नुपर्छ। आफ्नो इस्त्री स्टेशन इस्त्री बोर्डमा पर्याप्त स्थान हुनुपर्दछ ताकि यसले सुरक्षित र दृढ रुपमा खडा हुन सक्छ। ध्यान राख्नुहोस् कि अधिकांश समय व्यावहारिक मोडेल नियमित फलाम भन्दा ठूलो छ। मूलतया, पानी ट्यांक भनेको वजन निर्धारण गर्ने मुख्य कारक हो। त्यहाँ धेरै पानी छ, यो कठिन हुन्छ। प्रत्येक व्यावसायिक इस्त्री बोर्डले यस्तो लोड संग स्थिर गर्न सक्छ। यदि तपाईंको इस्त्री बोर्ड तोडिएको र बिस्तारै भयो, यो दुर्घटनाले चोट र क्षतिको परिणाम हुन सक्छ। त्यसकारण, कृपया तपाईंको इस्त्री बोर्डको स्थिरतालाई पृष्ठभूमिमा छाड्नु नदिनुहोस्!
इस्त्री गर्ने स्टेशनबाट कसले लाभ उठाउँछ?
इस्लामिक गतिविधिले ठूलो मात्रामा इस्त्री गर्ने लागि धेरै समय लाग्छ। यदि लाँड्री बास्केटबलमा अझै पनि कडा-फलाम कपडाहरू छन् भने, इस्त्री गर्ने प्रायः स्थगित हुन्छ। चाँडो वा पछि यो एक विशाल पर्वतको इस्त्री हुनेछ। यदि तपाईं एक व्यक्ति हो कि एक मात्र शिकन स्वीकार गर्न सक्दैन, इस्त्री एक शक्तिशाली कार्य बन्छ। एक इस्त्री स्टेशन निश्चित रूपमा तपाईंको लागि समाधान हुनेछ। यसले धेरै समय बचत गर्न सक्छ, किनभने यो चमत्कारको समय समय बचत र क्षमताको लागि छ। इस्त्री गर्ने पछि यी इस्त्री मोडेलहरू कुन राम्रो परिणामहरू हेर्न हेर्न सजिलो छ। भित्री-औँ-फलामका कपडाहरू पनि यो सफा र झन्झट मुक्त हुन्छन् यी प्राविधिक चमत्कारहरू। साथै माझ्छु अप पहिले नै पह्न लुगाहरू यी यन्त्रहरू मात्र राम्रो देखि रिपोर्ट गर्न सकिन्छ। बहु-प्लाई सामग्री, राम्रो र नाजुक वस्त्रहरू पनि नम र हट भापबाट लाभ उठाउँछन्। व्यावहारिक छ विभिन्न ऊतकहरूको अनुकूलता, उदाहरणका लागि, यदि तपाईं रेशम ब्लाउज वा पलिएस्टर राईगाउन फलाम गर्न चाहनुहुन्छ भने, केवल गर्मी र भाप कम गर्नुहोस्। अर्को लुगा र कपासको रूपमा हल्का साम्राज्यहरू, थप शक्तिलाई सम्हाल्न सक्छ Dampfbügelstation.
एक इस्त्री स्टेशन निम्न दावीहरूको लागि:
शिकन-मुक्त कपडा र अन्य कपडाहरूको लागि निरन्तर मांग।
समय बचत र थप नि: शुल्क समयको लागि इच्छा।
इस्त्री गर्ने बेला ऊर्जा बचत गर्न दावी।
मूलतया, एक आकर्षक र राम्रो-सुगन्धित व्यक्तिहरूको लागि झन्डा बिना ड्रेस बिना लिंग, उमेर वा व्यवसाय को लागी। क्रप गरिएको कपडाले लापरवाहीको प्रभाव दिन्छ, जुन न केवल काम गर्ने जीवनमा नकारात्मक छवि सिर्जना गर्दछ। व्यावसायिक जीवनमा, धेरै मानिसहरू जनतामा छन्, ग्राहकसँग सम्पर्क छ र कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्दछ, त्यसमा राम्रो लुगा लगाएका कपडाहरू हेर्न सकिन्छ।
उचित रखरखाव राख्नुहोस्
एक जस्तै इस्त्री स्टेशन शायद नै कुनै पनि यांत्रिक घटक छ, नियमित रखरखाव को प्रयास कम छ। निस्सन्देह, उपकरणको गुणले ठूलो भूमिका खेल्छ। राम्रो उपकरण बिना साढे वर्षका लागी राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छ। तर लगभग सबै यन्त्रहरू जुन पानी संग सम्पर्कमा आउँछ, यहाँ एक कमजोर बिन्दु हो। ट्याप पानी क्षेत्रीय रूपमा धेरै फरक हुन सक्छ। विशेष गरी पानी कठोरताका मानहरू भिन्न हुन्छन्। यसको कारण मुख्यतः पेय पानीमा निम्तो सामग्री हो। लेम को निपटने को सम्पत्ति छ। यस प्रकार जिद्दी घर्षण उत्पन्न हुन सक्छ, जुन इस्त्री स्टेशन चाँडै वा पछि उनीहरूको प्रकार्यलाई खराब पार्छ। नजलहरू वा होसहरू यस जम्मा गरी बखत हुन सक्छन्, जसले गर्दा प्रदर्शन वा कुल विफलता कम भयो।
पानी कठोरता परीक्षण स्ट्रिपहरू निर्धारण गर्न उपलब्ध छन्, जुन निर्माताहरू आंशिक रूपमा इस्त्री स्टेशन वरिपरि बार लाउनु। तिनीहरू पनि अलग रूपमा उपलब्ध छन् र पानीको कठोरता अज्ञात छन् जहाँ क्षेत्रहरूका लागि सिफारिश गरिन्छ वा व्यापक रूपमा भिन्न हुन्छ। मूलतः, त्यहाँ पेय पानी आपूर्तिकर्ताको पानीको गुणको बारेमा धेरै जानकारी पनि छ। यो मा आधारित हुन सक्छ पानी कठोरता पहिले नै चिन्ता छ भने descaling लामो वा छोटो अन्तरालहरूमा लिइन्छ। केही निर्माताहरूले पनि क्यालिफोर्नियालाई रोक्नको लागि केहि एजेन्सीहरू वा additives लाई आपूर्ति गर्दछ। वैकल्पिक आसुत पानी प्रयोग गर्न को लागी हुनेछ, जुन केहि निर्माताहरु लाई पनि निर्देशित गर्दछ। यहाँका परिवारहरू, जसमा घरको पिउने पानी छ decalcification प्रणाली स्थापित जीत, यहाँ लाभ मा स्पष्ट रूपमा छन्।
प्रयोग पछि इस्त्री स्टेशन यो तौलिएको पानीको साथमा छोटो, निष्पक्ष हुनु पर्छ। ट्यांक वा पाइपमा कुनै पानी हुँदैन, किनभने पानी भत्काउँछ भने, चूना वा अन्य मलबे रहनेछ। त्यसैगरी, जीवाणुले चाँडै स्थिर पानीमा बनाउदछ। यदि descaling आवश्यक छ भने, निर्माताको निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्, अन्यथा वारेन्टी खाली हुन सक्छ। जब सफा गर्नु पर्छ इस्त्री स्टेशन मुख्यबाट विच्छेद हुनुहोस् र पर्याप्त ठोक्नुहोस्। केही निर्माताहरूले आफ्ना उपकरणहरूसँग उपलब्ध गराउँछन् Kalkablass स्क्रू, जसले descilling सजिलो बनाउँछ। अपरेसन निर्देशनहरूमा, निर्माताले प्राय: आफ्नै तलवार एजेन्टरहरू प्रदान गर्दछ वा सिफारिस गर्दछ। सकारात्मक रूपमा क्याल्क-क्लीन प्रकार्य हो फिलिप्स जीसीएक्सएनएक्स / एक्सएनएक्सएक्स फास्टकेयर भाप इस्लामिक स्टेसन
वैकल्पिक रूपमा, स्टोरहरूमा उपलब्ध सार्वभौमिक घटाउने एजेन्ट उपलब्ध। रखरखाव को समयमा, पावर कोर्ड मा ध्यान दिए जान पर्छ। विशेष गरी पुरानो उपकरणहरू दोषको साथ समय समयमा हुन सक्छ। केबल र कनेक्टर क्षतिग्रस्त हुनु हुँदैन।
फिलिप्स GC7715 / ste० स्टीम जेनरेटर लोहे, स्टेनलेस स्टील, २.२ लिटर, कालो, बैजनी सूचक
हटाउन सकिने XXL 2,2 लिटर पानीको ट्यांक
2.400 वाट अधिकतम। प्रदर्शन, 5,5 बार दबाव, भोल्टेज: 220 लाई 240 V सम्म
120 / min सम्मको निरन्तर भाप उत्पादन, 250 g / min सम्मको शक्तिशाली भाप बढावा
मौन इस्त्रीको लागि मौनता प्रकार्य
भापग्लाइड सिरेमिक एकलप्लेटले इष्टतम शिकन स्मोलाइङलाई सुनिश्चित गर्दछ
वैकल्पिक: भाप लोहे
मूलतः, एक भाप लोहे एक इस्त्री स्टेशन भन्दा कम छ। यो स्टोर गर्न धेरै ठाँउको आवश्यकता छैन र मूल्यको सट्टा सजिलो छ। तथापि, किनकि यसले पानीको ट्यांकलाई एकीकृत गरेको छ, जब तपाईलाई लोभ गर्दा उच्च वजनको तुरुन्तै ध्यान दिनुहुन्छ। तथापि, इस्त्री गर्ने स्टेशनमा पानीको ट्यांक सिधै लोहेमा छैन, त्यसैले तपाईं कम वजनको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। जो लामो समयको लागि लोहे गर्नेहरूलाई ध्यान दिन्छन् कि तिनीहरूका कलाईमा राहत दिन्छन्। भाप इस्लामिक स्टेशनको लागि ठूलो दबाब बोल्छ किनभने यो फाइबर बिना प्रयत्न गर्दछ। मूलतया, एक भाप लोहे एक इस्त्री स्टेशन को बराबर बराबर विकल्प छैन।
अघिल्लो लेखमेटल डिटेक्टर